Mizzima TV Weekly, Business News No . 19 (18 May, 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No . 19 (18 May, 2013)
မဇ္ဈိမတီဗွီ အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း အမှတ်စဉ် – ၁၉ (မေလ ၁၈ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်)
ဒီတပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေထဲမှာတော့ မြန်မာ့ရတနာဘဏ်လို့ အမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာ့မွေးမြှူရေးနဲ့ ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာ အနာဂတ်စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ၊ မြန်မာ့အစားသောက်တွေ အဆင့်မြှင့်တင်ဘို့ လိုနေပြီလား၊ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေသာ မှန်ကန်အောင်လုပ်နိုင်ရင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး ဘယ်အဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်သလဲ .. စတဲ့သတင်းတွေအပါအ၀င် တခြားစီးပွားရေးသတင်းကို ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြပေးထားပါတယ်။